အပြာဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုရဲ့အနည်းငယ်နောက်ကွယ်မှအဆ၊အားလုံးအမှုအရာစဉ်းစား။ မြင်ရမှာကောက်ရိုးယို၊ကျနော်တို့ကသတိပြုမိကြောင်းရှိ၏ကွဲပြားတဲ့မရှိခြင်းရော်အာရုံ–သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားကစားကားဂိမ်းမိတ်ဆက်သင်အကြိုက်ဆုံးကာတွန်း၊ကယေဘုယျအားဖြင့်တော်တော်ခက်ခဲပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်စရာ၊ဤကွာဟချက်ကိုအတွက်စျေးကွက်အကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်'မြတ်'၊မရှိခြင်းများအတွက်ပိုကောင်း။ ငါတို့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်င့်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွသွင်းထားဒေတာဘေ့စများ၏ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအလေးပေးလုံးဝအချည်းဖြစ်၏။, အချို့အရှုးကျွန်တော်တို့ကိုပဌနာ၊အချို့သောကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သောကြောင့်သူတို့ကမှားအရေအတွက်–ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည်သိလျှင်သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေနေတယ်ချည်းလိင်ဂိမ်းများ၊ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးမင်းပတ်လည်ကိုလူများကိုသင်နဲ့အတူအတိအကျကြောင်း။ ကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးယခုကျွန်တော်ဦးဆောင်တာဝန်ခံနှင့်အတူဖြတ်တောက်အစွန်းရော်ညမ်းဂိမ်းကစား၏အကြိုက်ရာမဲ။ သင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်မဲ့အတွင်းပိုင်း–အလွန်အကျွံအလွန်ကြီးစွာသောပြာဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရး! ကျွန်တော်တို့တွေဟာစိုးရိမ်သင့်ကြက်၊ဒါကြောင့်လက်ချောင်းကိုဖြတ်ကူးရန်တတ်နိုင်င့်ပြီးစီမံခန့်ခွဲခြင်းမရှိဘဲများလွန်း။, ဒါဟာဖြစ်မသွားမယ့်အချိန်အကြာကြီးမတိုင်ခင်လေးရရှိမည်သည့်အရာကြွင်းလေ–အကြှနျုပျကိုသင်တို့အားပြောပြကြစို့။
ထိုအချိန်ကအရေးအသား၏ဤအနည်းငယ်သာ၏အရာကိုသစ်ပင်လိင်ဂိမ်းများအားလုံးအကြောင်းပါ၊ကျွန်မတို့ဟာပေါ်မှာထိုင်၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှု ၁၃ ဂိမ်းများနှင့်အတူ၊၃ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်သင့်ထုတ်ဝေခံရဖို့လာမယ့်အတွက် ၁၂ လများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အချိန်ဇယားတစ်ခုအပေါ်အခြေခံပြီးသေချာသောအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှနောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်အကြောင်းထုတ်ရှိ၏အမှန်တကယ်ကောင်းသော။ ကျနော်တို့ချင်ပါဘူးဆိုအချိန်ဖြုန်းနှင့်အတူဘာမှမခွဲပါ၏၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစမ်းသပ်နှင့်အလုပ်အချိန်ရောက်စေဖို့သင်စိတ်ကူးအနုပညာလက်ရာအပစ်ကြိုးနောက်တဖန်မကျော်နှင့်။, ကျနော်တို့အတော်လေးအကာအကွယ်များကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်၊ဒါပေမယ့်သင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်အချိန်ကအတွင်းအကြောင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်ကောင်း:ဒါကြောင့်လူအတော်များများကော်ပီကူးဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ၊ဒါပေမယ့်သူတို့ကအမြဲတိုကျင်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်! ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုခြင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးဂိမ်းကျနော်တို့ကတော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်အေးမြ။ ခံုး-စတိုင်ဖြန့်ချိ၊RPGs၊နှင့်ပင်တစ်ချိန်းတွေ့ဆပ်ကပ်–ရဲ့မော်ကွန်းတွေအကြောင်းသင်ပြပါလိမ့်မယ်တစ်ခုလုံးအသစ်၏ယ္လွည္း။ ကျမအတွက်မည်သည့်လိမ်လည်မှုများလာသောသင်တို့၏လမ်းမှအခြားနေရာများ:အကောင်းဆုံးအပေါ်ပွဲချင်းပြီးယနေ့အင်တာနက်ကိုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်သစ်ပင်ပုံစံညမ်းဂိမ္းမှန်သည်။, ကျွန်တော်တို့ခုန်နှင့်စည်းကြိုတင်ပြီးလူတိုင်း၊အပေါင်းလို့မှအခမဲ့င်ပူးပေါင်း! မှန်တယ်:သင်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်အချည်းလိင်ဂိမ်းများအခုအချိန်မှာတစ်ပြားပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းလုံးဝ freemium modelled၊ဒါကြောင့်လာအပေါ်အသာရဂိမ်းကစား–အဘယ်သူမျှမငွေသားလိုအပ်သည်။
အခါသင်ဖန်တီးပြက်ညမ်းဂိမ်းရဲ့အရေးကြောင်းသေချာစေရန်အရည်အသွေး၏ရုပ်ပြောင်ဟာသအစံုေ။ ဘငှားရမ်းအကောင်းဆုံးအဆိုတော်များအတွက်ဂိမ်းအကူအညီတည်ထောင်တင်ဆက်ဖစ္ၿသောအခါဒါကြောင့်ကျနော်တို့အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်၊သူတို့ကအမှန်တကယ်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကစစ်မှန်တဲ့အရင်းအမြစ်။ ခင္ဗ်ားခံစားဖို့အချည်းပုံစံညမ်းဂိမ်းနှင့်သဘာဝကျကျ၊သင်ရှိသည်တစ်ခုမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကကြည့်စစ်မှန်သော။ ကြီးစွာသောအရာကကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်ပုံစံကလုံးဝကမ်းလှမ်းတက်ဖို့သင်ထွက်စစ်ဆေးအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးမှရတယ်။, သင်စာသားအတိုင်းဆုံးရှုံးဖို့ဘာမျှ–ဒါကြောင့်လာနှင့်မြင်ရရုံဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာနှင့်အဆင့်များယူရမှုအရာရှာနေဒီကောင်း။ တိကျမှန်ကန်သောမူရင်းအကြောင်းအရာသည်လည်းအရေးမှကြွလာသောအခါအသံသရုပ်ဆောင်:အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ကျွန်တော်ကိုလှည့်စူပါသောငှါဝန်ဆောင်မှုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုေသံဖိုင်ကနေအရင်းအမြစ်နှင့်ဖန်တီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရလဒ်များကိုနှင့်အတူသင်ယူမှုနည်းစနစ်ကချမှတ်။ ရိုးရှင်းစွာကိုထား၊ငါတို့သည်အစာကျွေးအတွက် Marge စကားပြော ၁၀ ထို့နောက်မိနစ်နှင့်ချီရှိသည်နိုင်သူမ၏ညည်းတွား၊ညစ်ပတ်ပေရေပြောနေတာပြီးတော့–တော်တော်လေးလုပ်ကိုင်ပစၥည္းမ်ား၊မှန်သော?, သင်ရရှိပါသည်ပြီးဖို့ဘယ်လိုမြင်လည်ပတ်သောအတွက်ငါတို့၏ဂိမ်းအမှန်တကယ်လေးမြတ်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဒီနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မမြင်သုံးဘယ်နေရာမှာမဆို၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းယခုကျွန်တော်တို့ရရှိကြကုန်အံ့ကြောင်ထွက်အိတ်တိုင်းမင်းညမ်းဂိမ်းအသိုင်းအဝိုင်းကအလုပ်လုပ်တယ်အပေါ်သရော်တဲ့ပစ္စည်းဟာဒါကိုစတင်ပြီးလုပ်နေပါတယ်။
သင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဘာမှကစားခေါင်းစဉ်မှာချည်းလိင်ဂိမ်းများ–အနည်းဆုံးမဒေသမှာအနည်းဆုံး။ မြင်၊ကျွန်တော်တို့ပြေးစီမံချက်များဖြင့်ဘြတ္နေလျှင်ဒါကြောင့်သင်အပေါ်ရှု၊မြေခွေးသို့မဟုတ် Chrome၊သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်အဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကိုကုန်တင်တက်ဆိုဇင်ပေါင်းဖြန့်ချိသည္။ ကြီးစွာသောအရာအကြောင်းဒီအကြောင်းအချက်လည်းဆော့ကစားခွင့်ပြုထားတစ်ဦးအနေဖြင့်မိုဘိုင်းကိရိယာ။ အများစုကပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူအက္ပ္စတိုးယေဘုယျအားဖြင့်ခွင့်မပြုရွယ်ရောက်လီေ၊လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သူတို့တွေဟာကိုဘန်ကီမွန်းဝဘ်နရာျဖစ္သည္၊ယခုတယ္။ ဒါကအဘို့ကြီးသောသတင်းကိုကြောနတ်ဆိုးထွက်ရှိသောဖုန်းအသုံးပြုချင်မှပယ်တွင်လူရှုပ်ဖို့ညမ်း။, ကျွန်တော်လည်းယူခွင့်ပိုကောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းစဉ်အတွက်အမိန့်သေချာအောင်သူတို့ပြေးနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကိုသို့မဟုတ်ပြဿနာများအပေါ်မိုဘိုင်းဖုန်း–ကိုယ့်အဖြစ်ကြာမြင့်စွာကတဲ့-လတ္တေ။ ကျနော်တို့သေချာပါမဖွစျနိုငျသောသင်၏iPhone ၄ ကိုသွားအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လာမည့် ၁၀ နှစ်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပြုပါလိမ့်မယ်အားစောင့်ရှောက်ရန်လူများစွာအတွက်ကြင္းအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ပြောချင်ကြောင်းလူတိုင်းကျနော်တို့အတွင်းအချည်းလိင်ဂိမ်းများ:ွိလို၊အကြှနျုပျတို့သညျတွေ့ဆုံရန်သွားလုပ်နေ!
ရှိပါတယ်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာအကျင့်ကိုကျင့်မှာချည်းလိင်ဂိမ်းများဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာ၊ငါမထုတ်ဖေါ်။ အဘယ်သို့ငါပြောပြီင့်ကဤသို့ဝေးပဲတစ်သေးသေးလေးကိုသွက်သွက်သွားမယ့်ဘာကို–မည်သူမဆိုတက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်မြင်နိုင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုင်းအလုပ်၏အလွန်အလေးအနက်အမှန်ပင်။ ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုရပ်တန့်၊နိန်နှင့်အတူတက်ခွဲတန်းတူအကြောင်းအစက်အပြောက်မဟုတ်ပေးခြင်းသင်အဆုံးစွန်သောသီ-အာကားဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရးရှိကြသည်။ လာရန်ကျော်အပေါ်ချည်းလိင်ဂိမ်းများယခုနှင့်အတူသင့်ရဲ့အခမဲ့အကောင့်နဲ့၊သင်သိလာပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့ကအမှန်တကယ်ကိုဆိုလိုသည်ဖို့လက်လှမ်းရှိသည်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောပြောင်ဟာသ။